Date My Pet » How To Make Open Relationships Work
Last updated: Jan. 20 2021 | 3 Maminitsi verenga
Pane mutsetse kubva Brooke Fraser rwiyo kuti anoenda "rudo Real rudo nesimba". Izvi zvinogona kuva sunungukei. Kusiyana mune Mills & Boons kudanana enganonyorwa kana Disney mabhaisikopu, Ukama havasi anoguma pamwe nemadzimai vakatasva unoenda kumavirazuva. Chii chinouya pashure kuzivisa rudo nesimba uye kuzvipira. Vanhu kazhinji kuedza vakakwana asi unogona kuwana ekare nokukurumidza. Upenyu rakaoma zvakakwana pasina kubata nezvose yokusafa mutambo. Kune rimwe divi pakafunuka, pane vanhu vari muukama vari yakazarukira kufambidzana kana kuona vamwe vanhu. Nepo mashoko okuti "ukama akazaruka" rave bandied pamusoro kwenguva yakati zvino, pachena tsanangudzo chii dzinosanganisira kwakadai ukama inoramba dzinovhiringidza vanhu vakawanda.
Ndezvipi chaizvo Open Relationships?
Vamwe vanoti kunyange pachena ukama kunopa vanhu rusununguko uye kuchinja chokunzi zvakabatanidzwa pasina akawedzera uremu tarisiro uye kuzvipira monogamy. Vamwe opine kuti chiri chinoshamisira nzira kubvumira vamwe kuti vabiridzire pane mumwe. Chero pfungwa iri, pane zviratidzo zvakajeka kuratidza kuti rakazaruka ukama vanoita basa kana akakwanisa uye zvikabatwa zvakanaka. Kufanana nevamwe ukama, zvose zvinoenderana chii mumwe munhu achida. zvakajeka, vanhu vari mhando izvi ukama vari mungozi dzakatarira mhando akasiyana nyoro. Kusiyana vaiva mune nomudzimai mumwe ukama, avo vari pachena ukama havana wokusarudza nokudhirowa "iye / iye vanyengedzwa pamusoro pangu" kadhi. Saka munhu aende sei pamusoro nechokwadi kuti yakashama ukama ari kubudirira uye vachingoramba mumwe?
Common Azova uye Kuzvipira
For Mutange, panofanira kuva kukwezvwa - mumuviri uye mupfungwa - pakati pemapoka vaviri. Shure kwezvose, kuti kwaizova chikonzero chikuru nei vaviri vacho pamwe pakutanga. Just nokuti vanosiya pachavo ndivhurire kuongorora nevamwe mapato vanofarira hakufaniri pakuedza kubva chokwadi kuti vanhu vaviri vakasarudza zvipire mumwe kwavowo. Kushanda kubva kukwezvana uku, chisarudzo ive ukama pachena kuti kungova kuti vaviri vacho vachiri kuda kudzidza kusarudza. saka, Kukwanisa kubata chinhu ukama rakavhurika inyaya nechokwadi kuti vaviri vanonzwisisa "mitemo" mutambo. Kufanana randinenge nomudzimai mumwe ukama, avo vari pachena ukama vaizova zvavanoda uyewo. The yokuwana munhu pachena ukama hubudirire une vaviri kunzwisisa nokuita kuti mitemo yakafanana.
Kuvimbika Anoenda A Long Way
Sezvinongoita zvinhu zvose muupenyu upenyu, kutendeseka chinhu guru chikamu rakavhurika ukama. Shure kwezvose, hwaro ane ukama rakavhurika ndechokuti pane utano chivimbo pakati vaviri ndiko. Chete nzira yokuti izvi zvinogona kushanda kunze ndiko kana zvose nguva dzose dzechokwadi vamwe. Zviri zvakare pamusoro yokudzora zvinotarisirwa. Ari ukama pachena zvakafanana zvikuru nemamwe marudzi ukama kuti kuona kwose kwose. Chero bedzi vaviri vari chinofadza pane inoumba simba rinomutsa ukama hwavo uye vanokwanisa kuramba kushanda kune ichi nevakawanda chinangwa, hapana chikonzero nei rakavhurika ukama hakuzogari refu dhonza. Mumwe chinoita chinokosha pane pachena ukama anobudirira ndeichi: Ko mumwe munhu kutarisira vabvemo? Kana ichi chiri kunangiswa, pakachena ukama wakaiswa kuenda.
Ehe saizvozvo, ane ukama rakavhurika haasi munhu wose. Kungofanana nezvimwe marudzi ukama, unogona anopedzisira kurwadziwa. zvisinei, rinogonawo kuva chaizvo ukama chokushandisa kunyanya vanhu vaya nokuva rakadzikama nemumwe apo vane mukana kundosangana vamwe panguva imwe chete. Vakawanda vangati opine kuti yakashama ukama vaende kundorwa chaizvo hwaro zvinoreva kuzvipira uye rudo rwechokwadi. zvisinei, panewo zviitiko apo vamwe mune ukama pachena here usaridza zvevakomana kana kusangana nevamwe vanhu. Vaya vanowana kubudirira pachena ukama vanowanzowana kuti kupiwa rusununguko zvevakomana vamwe chaizvoizvo vaswedere pedyo vavo. Chinokosha chokwadi muukama iri kwete chitaridzi kuti munhu akaisa pamusoro pavo asi mano nerimwe bato kuti kusarudza kwakavakirwa kunzwisisa.